Dawo loo tijaabinayo Ebola - BBC News Somali
Dawo loo tijaabinayo Ebola
6 Sebtembar 2014
Image caption WHO oo ka shirtay Ebola
Khubaro caafimaad oo ka qeyb galay kulan uu soo qaban qaabiyay ururka caafimaadka adduunka (WHO) oo ka dhacay magaalada Geneva, ayaa sheegay in ay aqoonsadeen dhowr qaab oo lagu sameyn karo dawo iyo tallaal uu yeelanayo cudurka Ebola.
Ilaa iyo hadda ma jirto dawo la ogyahay oo lagula tacaalo cudurka dilaaga ah ee galaaftay noolasha ku dhowaad 2000 oo qof oo ku nool dalal ku yaalla Galbeedka Afrika.
Ururka WHO ayaa ka digaya in ay sare u kici doonto tirada dadka u dhimanaya cudurka Ebola ee faraha ba’an ku haya dalal ka tirsan Galbeedka Afrika.
Dawooyinka tijaabada ah ayaa waxaa ka mid ah mid laga sameynayo dhiiga dadka uu ku dhacay Ebol isla markaana ka badbaaday, dawada loo yaqaano Zmapp iyo weliba laba tallaal, kuwaas oo dhammaantood aan lagu tijaabin bani’aadanka, balse natiijo wanaagsan ka muujiyay tijaabo lagu sameeyay xayawaanka.
Khubarada caafimaadka ayaa hadda doonaya in ay dadka ku tijaabiyaan dawooyinka iyo tallaalka, waxaana dadka iskood u ogolaaday in lagu tijaabiyo ka mid ah shaqaalo caafimaad.
Dawada cudurka Ebola ayaa degdeg loogu baahan yahay maadama uu cudurka si xowli ah ugu faafayo dalal ka tirsan Galbeedka Afrika, oo uu khatar ku hayo adeega caafimaad ee dalalka Liberia, Guinea iyo Sierra Leone.
Goobaha caafimaadka ee dalalkaasi ayaa qarka u saaran in ay bur buraan oo xitaa laguma daweeyo dadka qaba xanuunada caadiga ah sida malariyada, halka qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadkana aanay shaqada xaadirin iyaga oo ka cabsi in uu ku dhaco cudurka Ebola.
La dagaalanka cudurka Ebola ayaa u baahan kumannaan ah shaqaale caafimaad oo si wanaagsan u tababaran oo u qalabeysan. Sameynta dawada ayaa sidoo kale u baahan waqti iyo kharash malaayiin dollar ah. Dalalka uu cudurka hadda saameeyayna iskuma heli intaasi oo dhan.